wifi Password ကို [Root] | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အင်တာနက်က Apps ကပ » wifi Password ကို [Root]
wifi Password ကို [Root] APK ကို
ဤလျှောက်လွှာကိုသာအမြစ်တွယ် devices များအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်။
WIFI password ကိုအင်္ဂါရပ်တွေ:
သင့်ရဲ့ device ကိုသိမ်းဆည်းအားလုံး Wi-Fi password ကိုစာရင်း, display နှင့် backup လုပ်ထား■!
Copy ကူး Wi-Fi Password ကို■ (ဘယ်နေရာမှာမဆို paste ချနိုင်မှ) clipboard မှ
■ဝေမျှမယ် password ကို SMS သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကတဆင့်, ဝိုင်ဖိုင်တိုက်ရိုက် ... ..
အမြစ်တွယ် device ကို?
သင့်ရဲ့ device ကိုစတိုးဆိုင်များ Wi-Fi password များသောကြောင့်သင်သည်အသစ်တစ်ခုကို Wi-Fi ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ။ သင်ကစကားဝှက်တွေကို access နှငျ့သငျစူပါအသုံးပြုသူခွင့်ပြုချက်ရှိမဟုတ်လျှင်သူတို့ကိုပြန်လည်ရယူပေးနိုင်မရှိကြပေ။ အမြစ်အပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါကဒီမှာ checkout: http://www.androidcentral.com/root
သငျသညျရှိစေခြင်းငှါမဆိုပြဿနာများကိုသို့မဟုတ်ဤလျှောက်လွှာကိုတိုးတက်စေရန်မည်သည့်စိတ်ကူးများအတွက် (dinostudio8891@gmail.com) ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်ကျွန်တော်တို့ကို5ကြယ်ပွပေးပါ!
ကျေးဇူးတင်ပါသည် & ပျော်မွေ့!
* 1.5: Add ရှာဖွေရေးဝိုင်ဖိုင် function ကို
* 1.6: အကိုခေါ်လာသောအခါ app ထဲမှာ Hidden အညွှန်းအမြင်။
* 1.7: မိုင်းနား bug ကို။
* 2.0: မိုင်းနား bug ကို။
* 2.8.3: မိုင်းနား bug ကို။
2.18 ကို MB
Wi-Fi Dumpper ( ...